नेपाली काङ्रेसको महाधिबेसनमा कुशल नेता चुनियोस
You are here: Home»demo1»नेपाली काङ्रेसको महाधिबेसनमा कुशल नेता चुनियोस
Wednesday, 24 February 2016 18:52
हिजो यो गर्‍यो काङ्रेसले, उसो गर्‍यो बिपिले, जिबन नै अर्पण गर्‍यो कृष्ण प्रसाद र सुशिलले भनेर मन्चमा कुर्लेर हुने भए हाम्रो देश आज अती धेरै सफलताको सिखरमा पुगिसकेको हुने थियो। हामीले राणा हटायौ, पञ्चे हटायौ , राजतन्त्र उखेल्यौ भनेर छाती फुलाएर आँफै राणा, पञ्चे अनी राजा बनेर बिलासीता उपभोग गर्दैमा बिकास हुने भए हामी संसारकै सक्तिशाली देश बनी सक्थ्यौ। शायद संसारमा यस्तो देश नहोला जुन देशमा सतरी बर्षको अवधिमा राणा, प्रजातन्त्र,पञ्चायत,बहुदलिय प्रजातन्त्र अनी गणतन्त्र गरी पाच-पाच चोटि राज्य ब्यवस्था परिवर्तन भएको होस्। तर हाम्रो देशमा भएको छ, तथापी राज्य, प्रहरी, प्रशासन सबैतिर सुशासन नभएर अझै सम्म कुशासन नै भोग्न वाध्य छौ हामी करिब तीन करोड नेपालीहरु। यसले के बताउछ भने राज्य ब्यवस्था असफल भएको हैन हाम्रो देशमा, त्यसलाई परिचालन गर्ने बुज्रुकहरु पो नलायक बनेका हुन त। तसर्थ अब हामीलाई राज्य ब्यवस्थालाई दोश दिएर पंन्छिने हैन यसलाई सदुपयोग गरेर राम्रा परिणाम निकाल्न सक्ने नेत्रित्वको खाचो छ। अब चाडै नेपाली काङ्रेसको महधिबेसन हुँदैछ जसमा यस्तो ब्यक्तिको चयन होस जसले जस र अपजस दुईवटै दुइटा काधमा लिएर देशलाई बोक्न सकोस।
सुन्दै छक्क पर्छु म त; पार्टीमा धेरै योगदान भएको मान्छे रे फलाना, फलाना पार्टीमा धेरै बर्ष बिताएको मान्छे रे, फलानाको भारतसँग राम्रो सम्बन्ध छ रे, फलानाको लेगेसी छ रे , के के हो के के ।किन चर्चा हुँदैन कुनै काङ्रेसिको? जसले देशलाई सही बाटोमा लान सक्छ भनेर। जसले देशमा बिकासको मुल फुटाउन सक्छ भनेर। जसले सुशासन गर्न सक्छ भनेर। कि कुनै काङ्रेसीको योग्यता नै नभएको हो देशलाई गरीबिबाट माथि उकास्न? पार्टीलाई योगदान गरेर, पार्टीमा धेरै बर्ष बिताएर, भारतसँग राम्रो सम्बन्ध भएर अनी लेगेसी भएर खै के गरे ति नेताहरुले? केही सकरात्मक परिवर्तन ल्यायो? अह केही राम्रा परिवर्तन देख्दिन म त। तीन दसक भित्र भारतले दुई चोटि नाकाबन्दी लगाएर पुरा गरे धेरै आफ्ना स्वार्थ अब अर्को चोटि नाकाबन्दी हुँदा के हुने हो? कसले सोच्ने यसको बारेमा? बन्द-हड्ताल, गुण्डागर्दी, भ्रस्टचार अनी बलत्कारको मात्रा बढदो छ। कसले बन्द गर्ने यिनिहरुको? बेरोजगारको चपेडामा परेर परिवारलाई छाडेर युवाहरु अनिस्चित भबिस्य लिएर बिदेशिदैछन ,यसको अन्त्य गर्ने कसले? तसर्थ म भन्छु अब पाका, पुराना, लेगेसिवाला, बिदेसी दलाल हैन; आट-साहस भएका, देशप्रेम बोध भएका, क्षमतावान, कर्मठ, दुरद्रिस्टी अनी योजना भएका नेताको खोजी हुनु पर्छ नेपाली काङ्रेसमा जसले देशमा भएका सम्भावनाहरुको खोजी गरी सम्पूर्ण नेपालीको आधारभुत आवश्यकता पुरा गर्न पहल गरोस। मेरो शुभकामना छ नेपाली काङ्रेसलाई कुशल नेताको उदय होस यो महाधिबेसनमा।
काहाली लाग्दो द्रिस्य देख्छु म यो महाधिबेसनको अभियानभित्र, कुनै नेता छैन म यि कुराहरु गरेर देशमा उन्नती प्रगती गरेर सबै नेपालीमा राहत प्रदान गर्दछु भन्नेहरु अथवा म यो यो काम गरेर नेपाली काङ्रेसलाई नेपालको नम्बर वान पार्टी बनाउछु भन्नेहरु। न कि कुनै कार्यकर्ताहरुलाई नै देशको या पार्टीको चिन्ता छन। सबैलाई चिन्ता छ त कुन गुट उपगुटमा बस्दा म के पद पाउछु।हो पद पनि पाउनु पर्छ राजनीति गर्दा तर भिजन सहितको राजनीति गर्नेहरु हुनुपर्दछ भन्ने मेरो मान्यता हो। राजनीति ब्यक्तिबादी सोचभन्दा सामाजिक सेवाको रुपमा हुनुपर्दछ भन्ने मेरो मान्यता हो। महाधिबेसन भनेको पदको लागि मात्र हैन, यो त नयाँ बिचारको लागि, नयाँ भिजनको लागि, नयाँ योजनाको लागि हो। तसर्थ नयाँ युगान्तकारी परिवर्तनसहितको समाज सुधारक देश बिकासका सोच भएकाहरुको जन्म अनी ऐक्यबद्दता होस यो महाधिबेसनमा। पुरानै सोच, पुरानै प्रब्रिती, पुरानै नेत्रित्व स्विकार्ने भए किन महाधिबेसन? तसर्थ नयाँ नेपालमा नयाँ सोचको अवतरण होस यो महाधिबेसनमा, जसले सकरात्मक उर्जा प्रदान गरोस सम्पूर्ण नेपालीहरुमा। यो महाधिबेसनले एउटा यस्तो कुशल नेत्रित्व देओस जसले नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन सकोस।